Archive du 20190806
Tao anatin’ny 10 taona Ireo lainga folon-dRajoelina…
Voalohany, ny Lapan’ny tanàna eny Analakely izay nambaran’i Marc Ravalomanana nandritra ny adihevitra tao amin’ny TVM ny 9 desambra 2018, fa nanome vola 5 miliara tamin’io ny fitondrana Ravalomanana.
CENI Vonona hiatrika fifidianana ivelan`ny main-tany
Araka ny lalàna dia 90 andro mialoha ny daty hanatanterahana fifidianana no tsy maintsy hivoahan`ny didim-panjakana miantso ny mpifidy.
Raharaha Mbola Rajaonah « Misy ambadika politika ! », hoy ny Soluma
Misy ambadika na hoe “manoeuvre” politika ny raharaha Mbola Rajaonah, hoy ny avy eo anivon’ny fikambanana Soluma sy Fitoniana tour, raha nanazava mikasika izany omaly.
Lalàna mifehy ny serasera Halalaka tokoa ve ny asa fanaovan-gazety ?
Notaterina ampahibemaso omaly ny fehin-kevitra teo anivon`ny minisiteran`ny serasera sy ny kolontsaina ka tapaka fa tsy hanova izay fehin-kevitra rehetra niarahana nanapaka nandritra ny fakan-kevitra
Haino aman-jery eto Madagasikara Mivadika “TNT” avokoa hatramin’ny jona 2020
Ny tontolon`ny serasera sy haino aman-jery dia tsy afa-misaraka amin`ny fampandrosoana ny firenena.
Masera Madinika eraky ny Fitiavana Mahazo tombontsoa amin’ny fiahiana ara-tsosialin’ny CNaPS
Ny mpiasa mpikarama, izany hoe misy mpampiasa mandoa vola ary misy mpiasa miasa mandray vola isam-bolana, izay nosahanin’ny CNaPS.
Karaté Tompondakan’Analamanga 2019 Mpikatroka 170 no nandray anjara
Teny amin’ny kianja mitafon’Ankatso, ny alahady 04 aogositra tontolo andro lasa teo no nanatanterahana ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’Analamanga eo amin’ny taranja Karate-Do.
FIMPIMA Sampana Analamanga mikolo Hamelona ny tantara tsangana amin’ny endrika kabary
Tontosa ny faran’ny herinandro teo ilay hetsika "vakomanitra" notontosain'ny Fi.MPI.MA sampana Analamanga MI.KOLO na MIaro ny KOLOntsaina.